"Sadio Mane Heshiis Cusub Ayuu Saxeexayaa, Laakiin Mustaqbalka Salah Cirka Ayuu Ku Laalan Yahay" - GOOL24.NET
“Sadio Mane Heshiis Cusub Ayuu Saxeexayaa, Laakiin Mustaqbalka Salah Cirka Ayuu Ku Laalan Yahay”
Xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa loosoo jeediyey in uu qalinka u qaato heshiis cusub oo uu u saxeexo Liverpool, isla markaana uu ka faa’iidaysto fursadda uu waayihiisa ciyaareed uga sii wadan karayo halka ugu habboon ee ay taallo kubaddiisu, waxaana looga digay inuu isku dayo inuu ka tago Anfield.
Halyeyga Liverpool ee Jamie Carragher ayaa rumaysan, in Mohamed Salah aanu wax qalad ah samayn doonin oo aanu isku dayi doonin inuu ka tago Liverpool oo sannadkii 2017kii uu kaga soo biiray Roma, isla markaana 252 ciyaarood oo uu u saftay uu u dhaliyey 155 gool.
Laacibkan dhowaanta ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sannadka ee Ururka Qoreyaasha Kubadda Cagta, ayaa la sheegay in uu dhawr jeer iska diiday dalabyo ay Liverpool u bandhigtay si uu heshiis cusub ugu saxeexo, waxaana u gacan-haadinaysa Barcelona oo doonaysa inay la wareegto.
Laakiin Jamie Carragher ayaa rumaysan, in haddii uu Salah ka tago Anfield inay ku dhici doonto xaaladdii Philippe COutinho oo sannadkii 2018 ay Barcelona kaga iibsatay Liverpool lacag gaadhaysa £145 milyan oo Gini balse ay hadda £17 milyan oo Gini oo kaliya kaga iibiyeen Aston Villa.
Waxa kale oo min hal sano uu u hadhsan yahay qandaraasyada Sadio Mane iyo Roberto Firmino oo iyaagana aanu midkoodna saxeexin wax heshiis cusub ah.
Carragher oo xalay ka hadlayay Sky Sports kaddib markii ay Liverpool 2-1 kaga adkaatay Southampton ayaa farriin iyo talo waayeelnimo siiyey xiddigahan, waxaanu yidhi: “Waa in ay kaliya diiraddooda saaraan sidii ay kooxdan taariikh ugu abuuri lahaayeen.
“Ilama aha in waqtigan ay maskaxdooda ku jirto inay baxaan. Waxa ay ila tahay in Mane uu saxeexi doono, Salah mustaqbalkiisu cirka ayuu ku laalan yahay, Roberto Firmino na wuu dhamaysan doonaa qandaraaskiisa, waxaana suurtogal ah inuu si xor ah ku baxo dhamaadka xilli ciyaareedka dambe.”
Carragher oo si gaar ah ugu dheeraaday Mohamed Salah ayaa qiyaasay sida ugu dambaynta ay wax noqon doonaan, waxaanu yidhi: “Waxa aan rumaysanahay in Salah uu heshiis cusub saxeexi doono. Klopp ciyaartooyo fiican ayuu ka dhigay kuwa ugu wanaagsan, Salah ayaana ka mid ah kuwaas. Halkan ayaa ku habboon Salah, waxay ciyaartiisu ku habboon tahay inuu ka hoos ciyaaro Klopp, waana in uu xasuusnaado sidii ay ku dambeeyeen laba ama saddex ciyaartoy oo ka tegay Liverpool.”